my kitchen my life: sandwiches များ
1- minute steak
( baguette sandwich )
ဒီထဲမှာ ထူးခြားတာက ကလပ် club sandwich ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ကို ရိုးရိုးပေါင်မုန့် နဲ့လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပဲ ဖိုကားချား Focaccia bread နဲ့ လ်ုထားလို့ပါ။ Focaccia ဆိုတာ အီတလီ ပေါင်မုန့် တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ pizza dough နဲ့ အတူတူ ဖြစ်ပြီး သူ့ကို တော့ olive oil , herbs တွေနဲ့ ရောပြီး bake လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ plain pizza ကို တခါတခါ Focaccia လို့ခေါ်ပြီး complimentary အနေနဲ့ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ နောက် baguette bread ၊ သူ့ကို တော့ French bread လို့လည်း ခေါ်တယ်။ ကျနော် ဒီ မှာ တင်ဘူးပါတယ်။
( photo from wiki )
ဒီ French Bread ကို ( ဘရူချက်တာ )Bruschetta bread , Garlic bread ,( မိုဇာRဲလား ) Mozzarella bread စတဲ့ ဟာတွေကို လည်း ဒီပေါင်မုန့်ကနေ လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
chopped tomato , grated Parmesan cheese , pesto sauce တွေနဲ့ ရောနယ်ပြီး bake ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ခုပုံတော့ မဘိတ်ခင်ရ ပုံဖြစ်ပါတယ်။
Posted by leo mark at 1:10 AM
Mon Petit Avatar March 8, 2011 at 1:53 AM
All the sandwich seems very delicious, especially "bruschtte bread". May I know how many minutes to bake that bread? Thanks in advance!!!
Ngu Wah March 8, 2011 at 7:03 AM
yummy yummy စားချင်တယ်... အကုန်ကြိုက်တယ်...
leo March 8, 2011 at 8:14 AM
>>Mon Petit Avatar>>
we bake bruchtte until Parmesan cheese is melting.Around5mins. :P
>> Ngu Wah>>
အင်း...အကုန် ကြိုက် ရင် အကုန်သာ ချား အန်တီ ငု ရေ။း)